C/rashiid Janan oo gaaray magaalada Nairobi - Jowhar Somali news Leader
Home News C/rashiid Janan oo gaaray magaalada Nairobi
C/rashiid Janan oo gaaray magaalada Nairobi
Wararka aynu ka heleyno dalka Kenya ayaa sheegaya in Wasiirkii Amniga maamulka Jubbaland C/rashiid Janan uu goordhow ka degay magaalada Nairobi, kaddib markii diyaarad ciidan looga qaaday Kismaayo.
Sida wararku sheegayaan, C/rashiid Janan ayaa maanta duhurkii Doon ku tagay magaalada Kismaayo, saddex maalmood kaddib markii uu ka baxsaday gacanta dowladda Soomaaliya.
Warar soo baxaya waxa ay sheegayaan inuu Janan caasimadda dalka Kenya kula kulmi doono Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe oo maalmihii la soo dhaafay halkaasi ku sugnaa, iyadoo iska wareysan doonaan xaaladihii u dambeeyay ee ku soo kordhay Gobolka Gedo iyo guud ahaan Jubbaland oo intii uu xirnaa C/rashiid Janan dhaq dhaqaaqyo kala duwan ay jireen
Siyaasiyiin iyo Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa rumeysan in Hey’addaha dowladda qaarkood wax ka ogaayeen baxsashada Wasiir Janan, maadaama si aad ah ilaalo looga hayay halka uu ku xirnaa.
Taliye Kuxigeenka booliska Soomaaliya Jen. Zakiya Xuseen Axmed ayaa 28kii bishan shaacisay inuu Janan ka baxsaday xabsi ku dhow xarunta NISA oo uu ku xirnaa, iyadoo ninkan bishii August sanadkii 2019 laga qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho, isagoo xiligaa ku sii jeeday dalka Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee C/rashiid Janan ayaa Maxkmadda gobolka Banaadir ka soo muuqday bishii October, inkastoo wax xukun ah aan lagu ridin, balse Maxkamada ayaa amartay in xabsiga lagu sii hayo.